Espaina: Manohana Ve Sa Tsy Manohana Ny EuroVegas Ianao? · Global Voices teny Malagasy
Espaina: Manohana Ve Sa Tsy Manohana Ny EuroVegas Ianao?
Nandika (en) i Ariane
Voadika ny 24 Marsa 2012 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, русский, 繁體中文, 简体中文, Español, Français
Las Vegas ao Eoropa… Tianao ho fantatra ve ny momba izany? Tranobe marolafy tsy mena-mitaha raha oharina amin'ny namany Amerikana izay ahitana trano filokana enina, tokontany filalaovana golf, efitra filalaovana tantara-tsangana sivy, ary hotely roambinifolo, tsy lazaina intsony ireo trano fisakafoanana sy magazay marobe.
Izany no tetikasa nampahafantarin'ilay mpanakarambe Sheldon Adelson, Tompon'ny Las Vegas Sands ary olona faha-14 manankarena indrindra manerantany araka ny navoakan'ny gazetiboky Forbes. Taorian'ny nahombiazany tany Amerika (Nevada sy Pennsylvania) sy tao Azia (Makao sy Singapore), manintona mafy an'i Eoropa ary indrindra ao Espaina ankehitriny ny tompon-dakan'ny filokana.
Tetikasa goavana hiteraka famoronan'asa maherin'ny 200.000, hisarika fampiasambola eo amin'ny 15 hatramin'ny 18.8 miliara euros hatramin'ny taona 2022, ary hampidi-bola maherin'ny 15 miliara euros amin'ny alalan'ny fizahan-tany ao anatin'ny folo hatramin'ny dimy ambinifolo taona eo ny Euro Vegas. Toa mampiseho izany fa vahaolana iray ho an'ny firenena tsy tafavoaka amin'ny krizin'ny Euro, anisan'izany i Espaina, iray amin'ireo PIGS (Portigaly, Italy, Gresy, Espaina), fiteny manokana nampiasana hanesoesoana ireo firenena manana toekarena marefo.
Sheldon Adelson, Filoha Tale Jeneraly ny Las Vegas Sands, sary nalain'ny e7eye.org.il tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
Faritra roa no voakasik'izany: Madrid sy Catalonia. Naneho ny fanohanany tanteraka izany tetikasa izany ny Filohan'ireo faritra mizakantena anankiroa ireo ary nanambara fa vonona hanao izay tratrany mba handrombaka ny tontona Euro Vegas.
Nandritra ny resadresaka tamin'ny onjampeo Espanola Cope, niarahana tamin'i Esperanza Aguirre, filohan'ny Faritra Madrid, nilaza izy fa ‘adidiny’ ny mametraka EuroVegas ao Madrid:
“[…] asa raikitra 200.000 eo no horaisina vao vita ny tetikasa, tsy ambara intsony ireo [asa hafa] amin'ny fanamboarana ny hotely tranobe marolafy. Maro be ireo olona tsy mankasitraka ny tetikasa. Ny olona mitovy taona amiko dia mahita fa manafintohina ny Las Vegas, ny lalao, sy ny loka…. Toy ny maloto ny fahitan'izy ireo izany. Saingy ny tanora […], efa samy nandeha tany Las Vegas avokoa, satria Las Vegas ankehitriny dia tsy mitovy ny Las Vegas tamin'ny taona 40 lasa izay. Ao Las Vegas, eo amin'ny 18% eo ihany no vola atokana amin'ny lalao [fitambaran'ny vola], ny ambiny kosa amin'ny fanatrehana konferansa, ny mpihira tsara indrindra, fampisehoana tsara indrindra, lalao sarimihetsika tsara indrindra, ary ny toerana fanaovana fanatanjahantena tsara indrindra. Tahaka ny saha hoan'ny olon-dehibe izany. “
Araka ny hevitry Artur Mas, filohan'ny Faritra ao Catalonia, mahita izany tetikasa izany ho toy ny fampiasam-bola madinika izy izay manintona fizahan-tany manokana. Ho valin'ny tsikera avy amin'ny olom-pirenena, tahaka an'i Aguirre, izay mahita ny lalao ho toy zavatra kely amin'ny antsipirahany tsy misy dikany:
Ny tsy dia zava-dehibe amin'izany rehetra izany dia ny trano filokana. Ny zava-dehibe dia ny fametrahana an'i Barcelona sy Catalonia ho anisan'ny fizahan-tany manintona voalohany indrindra ao Eorope, alohan'i Paris sy London.
Na dia izany aza, mitaky fandeferana ny raharaha matotra tahaka izao. Ny gazety El País ao Madrid nampiseho ny lisitr'ireo takalo rehetra takian’ilay mpanankarembe, nokilasiana ho sokajy enina: asa, fampiasambola, fotodrafitrasa, tany sy ny urbanisation, ny resaka lalàna, ary ny hetra.
Tafiditra amin'izany ireto: ny fikarakarana manontolo sy maimaipoana ny tanim-panjakana ametrahana ny tetikasa; ny tsy fandoavana latsakemboka sosialy mandritra ny roa taona; ny tsy fandoavana hetra (TVA) mandritra ny folo taona; ny fanovana ny sata mifehy ny mpiasa, indrindra ny mpiasa vahiny; ny fandraisana anjaran'ny Faritra Mizakatena amin'ny fametrahana fotodrafitrasa fitateram-bahoaka mandra-pahatonga eny amin'ny trano marolafy; ny fanomezana alalana ny zaza tsy ampy taona hiditra ao amin'ny trano filokana fa raràna kosa izay hilalao, sns.
Casino ao Singapore, sary nalain'i Nathaniel Hayag, Flickr (CC BY-ND 2.0).
Raha hita fa hankato izany fepetra izany ny ben'ny tanàna ao Madrid, ny ben'ny tanànan'i El Prat de Llobregat (tanàna manodidina an'i Barcelona izay mety hanorenana ny tranobe marolafy), Lluís Tejedor, kosa manohitra izany tanteraka :
Tao amin'ny aterineto, na dia teo aza ny adihevitra mikasika ny asa nampanantenaina, hita fa tsy mankasitraka ny EuroVegas ny ankamaroan'ny mpiserasera. Indreto fanehoan-kevitra sasany nalaina tao amin'ny Twitter nampiasana tenifototra #eurovegas:
@jbasagoiti: #Eurovegas no mpamonjy antsika vaovao hamaha ny olana rehetra ao Madrid sy Barcelona. Tsy mino aho fa marina izany. bit.ly/yJD9Vj
@Brigi34: Ny tombotsoa lehibe azo amin'ny #Eurovegas dia ny tombontsoa ara-toekarena sy ny tahan'ny famoronana asa.
@exp_catalunya: Filohan'ny Disney teo aloha, nampitandrina an'i Espaina manoloana ny karazana fialam-boly ataon'ny #Eurovegasexpansion.com/2012/03/09/cat… via @expansioncom
Naneho hevitra noho ny lahatsoratra navoakana gazety mpivoaka isan'andro El País [es] ny mpiserasera :
yosisoytonto: Tsy hahazo lesona mihitsy isika, sa ahoana? Ny mampalahelo dia ny fiheverany ity firenena ity ho tahaka ny makorelina noana dia noana. Ny tena mahasorena dia tahaka izay indrindra ny fihetsik'i La ‘Marquise’ ( anaram-bositr'i Rtoa Aguirre). Mila paradisa ahafahana mangalatra amin'ny alalan'ny fandraharahan-dokany (fisolokiana mifangaro kisendrasendra) ingahy Forbes. Mitaky modelim-pamokarana mivelatra, teknolojika ary nosainina tsara izy ary ho takalon'izany dia entiny aty ireo Mafian'ny loka Amerikana. Rtoa La Marquise ô! tsy mahavita ny zava-drehetra ny vola. Akombony ny fe ramatoa, mahamenatra ny mahita anao toy izao amin'izay taonanao izao.
asdf111: Araka ny hevitro, mahamenatra tokoa ny mahita fa mitady hanambaka ny tetikasa mbola eo am-pifanarahana i El País. Antenaina kosa, fa ho tonga ao Madrid ny tetikasa tahaka ny iray amin'ny sary ity indray andro any. Lojika avokoa ny ankamaroan'ny fanovana takiana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena, ary ilaina indrindra aza. Tsy azoko mihitsy ny antony hitsikerana ny fanafoanana hetra madinika mandritra ny taona voalohany (toy ny fanao mahazatra amin'ny resaka afera izany).
‘EuroVegas No‘ , sehatra an-tserasera natsangana vao tsy ela ho fanehoan-kevitra amin'ny tsy fankasitrahana ny EuroVegas ary nisy koa ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety nokarakaraina tamin'ny Alarobia 14 Martsa, nandritra ny fotoana nanomezan'ireo fikambanana isan-karazany ny heviny. Hevitra iray lehibe manohitra izany ny hoe mety hampiteraka paradis fiscal (hetra) ny EuroVegas.
Tokony ho vita amin'ny fahavaratra hoavy izao ny fifanarahana eo amin'i Adelson sy ny governemanta Espainola. Eo am-piandrasana izany, voatantara tsara tamin'ny fampahalalam-baovao marobe ny adihevitra manodidina ny fananganana ny EuroVegas, ka nanomboka teo ny nampalaza izany, tahaka an'i Roberto Saviano, Italiana, mpanoratra boky momba ny mafia Italiana, Gomorra, izay nanoratra tao amin'ny Twitter:
@robertosaviano: Raha mankato ny EuroVegas izy ireo (ny Eoropeana sahala amin'ny Las Vegas ihany), hanjary ho foibe ao andrefana mpanangona ny mafia amin'ny fomba ofisialy i Catalonia.